5 Izixhobo eziSimahla zeSketchUp ezikwi-Intanethi
Oku kulandelayo yimithombo emihlanu encedisayo yoncedo lweSketchUp. Zonke ezi zixhobo zifuna ukuba unxibelelwano lwe-Intanethi, ke qiniseka ukuba ikhompyuter yakho ikwi-Intanethi ngaphambi kokuba uzame nayiphi na kwezi.
Izixhobo zoqeqesho lweSketchUp : ISketchUp ipapasha izixhobo zenqanaba lokuqala kanye kwiwebhusayithi yayo:
Izifundo zevidiyo: Xa iSketchUp yaqala ukusungulwa ngo-2000, yaziwa ngokuba yeyokufundisa ngevidiyo. Akukho nto injengokubona iSketchUp isebenza.
Izifundo ezizimeleyo: Ezi ziifayile zeSketchUp ezisebenzisa izigcawu ukufundisa imiba eyahlukeneyo yenkqubo ngokulandela kunye nesimbo sam. Ukuba le yindlela othanda ngayo ukufumana izinto, jonga.
IZiko loLwazi kwi-Intanethi: IZiko loLwazi lweSketchUp libandakanya amakhulu amanqaku kwifomathi yemibuzo neempendulo, eyilelwe ngokukodwa ukunceda abasebenzisi abatsha kunye. Eyona ndlela ilula yokufikelela kwiZiko loLwazi lweSketchUp kukukhetha uNcedo → iZiko loLwazi kwi-bar yeSketchUp.
SketchUcation : Ikhaya leeForam zoLuntu zeSketchUp, ngoku lelona qela likhulu nelisebenzayo kubasebenzisi beSketchUp emhlabeni. Ufumana iingxoxo, izifundo, iiplagi, iindaba, kunye neepiles zezinye izinto ezilungileyo kwiSketchUcation.
ISketchUp yeSikolo iividiyo: Esi sisijelo esothusayo seYouTube. Iividiyo zasimahla zireyithi yokuqala, kwaye ungathenga umrhumo ukuze ubukele ngaphezulu kwekhulu ngaphezulu kwiwebhusayithi yeSketchUp yeSikolo.
MasterSketchUp.com : UMat Donley ubeke indawo entle kakhulu enikezelwe kwiingcebiso kunye namaqhinga, iividiyo kunye nezinye izifundo. Ukwapapashe nje incwadi malunga neLayOut.
Ibhlog yeSketchUp : Ndwendwela ibhlog yeSketchUp rhoqo ngeendaba, uphononongo lwamatyala, iingcebiso kunye namaqhinga, iiprofayili zemodeli, iiplagi kunye nolunye uhlaziyo.
ulidibanisa njani iqhezu
I-duloxetine hcl dr 30 mg
kukuhambisa into evuselelayo
Ukuphazamiseka kolusu ebantwini